TV bakhtiyey kumanaan Carabi ku hadla - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · TV bakhtiyey kumanaan Carabi ku hadla
TV bakhtiyey kumanaan Carabi ku hadlaKumanaan ka mid ah macaamiisha saamayn ku leh marka booliska la xiray channels TV qaybiyey by shirkadda guul Malmö.
- Waxaan filayaa in shixnadaha bilaabi doonaa ugu dhaqsaha badan. Xeer ilaaliyaha ayaa overreacted, ayaa sheegay in Lars qareen Engström oo wakiil ka ah milkiilaha shirkadda xiray.
channels ayaa la gaabin
- Taasi xeer runtii waxay leedahay cagihiisa on. Haddii kale, gobolka waxaa la qaban mas'uul ka this doonaa.
SVT News Skåne ayaa la xaqiijiyay by macaamiisha ah oo iibsaday Times la sanduuqa TV ee hadda in marinnada ayaa hadda wuxuu yeeley Dabool. ATN-box, sida waxa loo yaqaan, waa mid ka mid ah ugu isticmaalay in qoysaska Carabi ku hadla.
Lagu tuhmay in ay copyright jabiyey
Shirkadda ku salaysan Malmö waxay bixisaa ku saabsan 2,000 channels TV, ugu horrayn macaamiisha Carabi ku hadla ee Sweden. sanduuqa set-top Shirkadda ayaa waxaa lagu gadaa dukaamo badan oo ay ku jiraan Malmo.
Sida laga soo xigtay xeerilaaliyaha shirkadaha TV ayaa ogeysiin shirkadda of jebinta copyright. Saddex nin ayaa la xiray shaki la jebinta copyright.
Warbixiyay by warbaahinta
On Tuesday, booliska xiray channels ee kormeerka farsamada, sida uu sheegay qareenka Lars Engström. Mana waxaa suurtagal ah si aad u hesho in on website shirkadda ee internetka.
- Waxay noqon lahaa mid xiiso leh in la ogaado oo TV shirkadda sheegay. view My macmiilka waa in uu leeyahay sharciga si buuxda ay khuseyso in la qaybiyo channels la liisanka, ayuu yidhi.
- Waxaan ninkan loo yaqaan sanado badan. Waxa uu yahay mid aad u taxadir in aadan samayn wax qalad ah.
Soo qayb galay wasiirka ganacsiga
Malmo shirkadda ayaa ahaa mid aad u guulaystay. Ganacsiga ee Sweden waxay ahayd sannad ka hor on daraasad on goobta.
Shirkadda lahaa iibka ah ku dhowaad 50 million oo uu leeyahay 25 shaqaale.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tusentals-drabbas-arabiska-kanaler-stangda11.11.2016. 21:03	Categories